Ezi ke zezona ntlanzi zinqabileyo zihlala emhlabeni Ngeentlanzi
Indalo yinto engalindelekanga. Ngalo lonke ixesha, umhlaba wethu ubuzaliswe zizidalwa ezingaqhelekanga. Izinto ezinomdla zokuthi, namhlanje, besingayi kucinga ukuba zikhona. Uninzi lwazo lwalukwimeko yasemanzini.
Namhlanje, kusekho izilwanyana ezininzi ezintle ezihlala nathi kwiilwandle zethu, imilambo, iilwandlekazi, njl. Imifanekiso ebukeka kakuhle, indlela yokuziphatha engaqhelekanga, njl.njl., Kwaye ayaziwa kangako.
Emva koko, siza kukubonisa ifayile ye- Uluhlu lweentlobo, ngakumbi iintlanzi, ezifumaneka kwiplanethi yethu kwaye zibaleke eziqhelekileyo.
3 IViperfish kaSloane
4 Ukulahla iintlanzi
5 Intlanzi ebomvu
6 Intlanzi yeGoblin
7 Intlanzi yase-Pacific
IChimera yeyosapho luka Intlanzi enkulu, kwaye sisizalwane esisondele kakhulu kookrebe.
Indawo yokuhlala yendalo iyahambelana nobunzulu bolwandle, ukufikelela kwi-4000 yeemitha. Le meko yenze ukuba ezi zilwanyana zibe yinyani yesayensi, kuba kunzima ukuzifunda.
Ngokubhekisele kwi-morphology yabo, banentloko ebalaseleyo kunye nomsila omde nomxinwa. Ukubonakala kwayo kunokufana, nokukhusela imigama, leyo yeempuku. Olu hlobo lweentlanzi lunokufikelela kwiimitha ezinesiqingatha ubude, kodwa aluqhelekanga.
Ulusu lwayo lugqunywe ngamaxolo amancinci olunika umbala omdaka-ngwevu onokuthi ujike ube mnyama. Abanawo amazinyo, kodwa iipleyiti ezibanceda batyumke amaqokobhe ee-mollusks kunye nee-crustaceans, ezisisiseko sokutya kwabo.
Kwiphetho lazo lasemva zinomqolo onetyhefu osebenza njengesixhobo sokuzikhusela. Bafumana ixhoba labo ngokubanjwa kwemagnethi ebuthathaka ekhutshwa zezi zinto, ngenxa yoluvo olusentloko.
Njengomdla, kuphela kwethambo lomqolo ukubonisa iimpawu zesibini semilenze.
I-sunfish yenye yeefayile ze- intlanzi emathambo inzima emhlabeni, malunga netoni ngokomndilili. Kufunyenwe abantu abafikelela kwiimitha ezi-3 ubude nakwi-2000 kg.Ibandakanyiwe kusapho lwe Iitetraodontiformes, kunye ne-puffer fish, ii-urchins zaselwandle kunye nezihlalo.
Ihlala ikakhulu kumanzi ashushu kunye neendawo ezinemozulu epholileyo emhlabeni. Umzimba wayo ucabalele, amaphiko emqolo kunye nasemaphandleni. Into enomdla kukuba yintlanzi ukuba inde kangakanani.
Ukutya kwayo kubandakanya ikakhulu i-zooplankton, eziyisebenzisa kakhulu. Abasetyhini banokubeka amaqanda angama-300 ezigidi, inani elingenakufikelelwa nangayiphi na enye into esaziyo ngoku.
I-Viperfish yaseSloane yenye yezona zilwanyana zaziwayo nezindlongondlongo zolwandle kunye neelwandlekazi.
Inobukhulu obuncinci, ijikeleze iisentimitha ezingama-25-30. Umbala wayo luhlaza okwesibhakabhaka, udityaniswe nesilivere kunye neetoni eziluhlaza.
Uphawu lwayo oluphambili ngumlomo wayo omkhulu, ehonjiswe ngamazinyo amakhulu afana namazinyo ayinika ukubonakala kobuqili. Olunye lweempawu zalo ngumqolo omde ophela ngo I-photophore (ilungu elikhanyisa), esebenza njengesixhobo sokutsala ixhoba. Le photophore ayisiyonto iqhelekileyo yomqolo, ikwanabanye kumacala omabini omzimba wayo.
Sinokulufumana olu hlobo lweentlanzi kumanzi ashushu kunye namanzi ashushu, kufutshane ne-3000 yeemitha.
Ziintlanzi ezinokuthi, kwinkululeko nakwindalo yazo, zinokufikelela kwiminyaka engama-30 yobomi.
Ukulahla kwentlanzi kuqhelekile kumanzi anzulu kwaye afudumeleyo Unxweme lwase-Australia kunye neTasmania, kuluhlu lwe-600 kunye ne-1200 yeemitha.
Yeyosapho luka Iintlanzi zoonomadudwane. Inobude obusondele kwi-30 cm. Umzimba wakhe awunaso isakhiwo semisipha esichaziweyo, kodwa ujonge, ngokungathi ubunzima be-gelatinous enobunzima obungaphantsi kancinci kunamanzi. Le nyani ivumela ukuba idadiswe kwaye ihambe ngaphandle kokuchitha amandla.
Ukutya kwesi silwanyana kubi kakhulu. Itya nayiphi na into etyiwayo enqunyanyisiweyo emanzini. Ewe, inomdla othile kwi-crustaceans.
I-red-lipped batfish ihlala emanzini Iziqithi zeGalapagos, malunga neemitha ezingama-30 ubunzulu. Yeyoluhlobo lwe Intlanzi yeOgcocephalus.
Isilwanyana esincinci, malunga ne-40 cm. Umzimba wayo umfutshane kwaye ucabalele, unamaqhuma angamaqhina ebusweni bawo wonke kwaye uphela entlokweni enkulu. Linombala omdaka ngombala.
Ewe, intloko yayo ikhethekile kakhulu, kuba inesakhiwo esibizwa ngokuba ukungabi nayo, Esebenzisa ukutsala ixhoba. Itya kakhulu iintlanzi ezincinci kunye nee-crustaceans. Kukwaphawuleka nemilebe yakhe ebomvu, kungoko igama lakhe.
Olu hlobo lweentlanzi lusasazwa kwiilwandlekazi zonke IPacific, iAtlantic kunye neIndiya. Ikwaziwa njenge "Intlanzi yentloko engenanto". Ihlala emanzini anzulu abekwe malunga ne-2000 yeemitha.
Inobukhulu obuncinci kakhulu, kufutshane neesentimitha ezi-5. Yenye yezinto ekuthiwa zibizwa njalo iintlanzi ze-tubular. Iqaqambisa intloko yayo ebonakalayo kunye namehlo ayo amahle, aneelensi ezinkulu ngokwaneleyo apho babamba khona isixa esikhulu sokukhanya kwaye bahamba ngokuthe nkqo.
Azizizo izilwanyana ezisebenzayo, kodwa qubha ngokuzolileyo ukhangela ixhoba elinokubakho (ii-crustaceans) onokondla ngazo.
Intlanzi ye-Ax ifunyenwe enzonzobileni nakumanzi ashushu eTropiki IPacific, iAtlantic kunye neLwandlekazi lwaseIndiya, apho ukukhanya kunqabile.
Esi silwanyana sinomzimba omncinci kakhulu, malunga ne-8 cm, ngokulingana nentloko, sibhityile kwaye sicaba emacaleni, oko kusenza sibonakale ngathi sizembe. Unamehlo amakhulu amilise ityhubhu, ajonge ngawo lonke ixesha.
Umbala uhlala uluhlaza oqaqambileyo okanye omfusa. Kwindawo esiswini ineebhendi ezibaleka emzimbeni kwaye zimnyama ngombala. Mthubi ubukhulu becala esifubeni esi silwanyana sodwa. Into ebangela umdla kukuba, iifins zazo azinamabala, ke ziyabonakala ngokucacileyo.
Kuyabonakala ukuba, imbonakalo yakhe imbi. Nangona kunjalo, le ntlanzi izolile kwaye ayinabungozi.
Ezi zezinye zezidalwa ezingaqhelekanga ezihlala kubude nakububanzi bezinto eziphilayo zolwandle ezahlukileyo emhlabeni. Izidalwa ekungaqhelekanga okanye kulula ukuzibona, ewe, zinegalelo elikhulu kubutyebi bezinto eziphilayo.
Kodwa loo nto ayipheleli apha, kuba kuphononongo olwahlukeneyo lwezenzululwazi, uninzi lwezilwanyana ezizodwa ziye zafunyanwa, ezinokuziphatha, isimilo, imikhwa yokondla, njalo njalo, ezingashiyi mntu engenamdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi enqabileyo emhlabeni